Amathuba neendawo zokubhala ngokweakhademikhi kwiZiko leeLwimi | Language Centre
Amathuba neendawo zokubhala ngokweakhademikhi kwiZiko leeLwimi
Posted on 03/09/2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news, Research, Writing Lab
NgoJuni kulo nyaka, amalungu abasebenzi beZiko leeLwimi abali-15 abamanxandanxanda bebhala uphando lwabo bathe banethuba lokuzinza eMount Fleur, kwintaba yokuhlehlela ekumaphandle aseStellenbosch, ukuze babhale, batye, balale kwaye babhale ngokongezekileyo kangangeentsuku ezintathu zilandelelana. Ukuhlehla ukuze ubhale kweZiko leeLwimi kudale ithuba elindilisekileyo lokumisela nokuvavanya iinjongo, ukucinga nokuzibhenca, ukwabelana nokunaniselana ngeembono, kwaye babhale ngophando lwabo. Abathabathi-nxaxheba bebehlaliswe kwindawo engenakungenelela naziphazamisi zamihla le, nokuthetha ukuba imveliso yomsebenzi wabo yathi yanda kakhulu.
Abathabathi-nxaxheba babesebenza kwiidrafti zamanqaku, uphando lweeMastazi okanye iPhD okanye iingxelo ezinxulumene nomsebenzi ezibandakanya ukubhalela uphando. Ukuhlehlela ukuya kubhala kwadala ithuba abalichitha bebhala kwaye bephuhlisa iimbono zabo. Behleli ngokukhuselekileyo kwaye bekhuthazekile, wonke ubani wanika ingqalelo engangqalileyo ekwakheni amanqaku okanye izahluko zabo kwaye bakwazi ukubhala ngokongezekileyo ngeentsuku ezintathu xa kuthelekiswa noko bebengakufezekisa kwiiveki ezininzi.
URemona Voges, oxakeke sisidanga sobugqirha-lwazi kuNcwadi kwesiAfrikaans uthe: “Ibingamava angakholelekiyo kwindawo ekhwankqisayo apho ndisebenza kwinzolo enkulu nenentsebenziswano yoogxa bam.”
“Bendivele ndingqale ngqi ngenqondo yam yonke kuphando lwam ndingakhange ndizikhathaze kwanto ngomsebenzi nezinye izibophelelo zam. Le yinto edla ngokungenzeki. Oku kuhlehlela ukubhala kundixhamlise ikhusi lokuphumla kwindawo nesithuba esizolileyo, esipholileyo, esidala ukuqiqa nesinenkxaso ukuze ndibhale ngokuphindaphindeneyo kunoko ndingabe ndiye ndakubhala ngokweziqhelo,” utshilo uHelga Syktus, owenza uphando ngokufundwa kolwimi ngokuzenzekelayo.
Nangona eli khusi lokubhala belijonliswe kubasebenzi beZiko leeLwimi kuphela, iLebhu yokuBhala yeZiko ibonelela ngeenkonzo namathuba anxulumene nokubhala kubafundi abenza isidanga sokuqala nabo benza isidanga esingaphaya kwesokuqala kwakunye nabasebenzi beYunivesithi. Kubonelelwa ngamathuba eengcebiso zokubhala ubuso ngobuso, ucweyo lokubhala, ukubhala ixesha elide kunye nokubanakho ukujoyina okanye uqala iqela lokubhala. Thumela i-imeyili kuAnne-Mari Lackay ngolwazi oluthe vetshe ngamathuba eengcebiso, kwaye ukuba ungathanda ukuthetha nomnye umntu ngokubhalwa ngokweakhademikhi, ungabhukisha iseshoni yeengcebiso ubuso ngobuso kwi-Kenako kwiphothali yakho ethi MySun. Ngocweyo, qhagamshelana noSelene Delport kwaye ngokubhala kumaqela, qhagamshelana noRose Richards.
Language CentreArticles in isiXhosa Dialogos Recent news Research Writing LabAmathuba neendawo zokubhala ngokweakhademikhi kwiZiko leeLwimi